လိမ္မော်သီးနှင့် စပျစ်သီးက ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းနိုင်
on: 08 Jul, 2017
လိမ္မော်သီးနဲ့ စပျစ်သီးမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းနှစ်မျိုးဟာ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါကို ကူညီတိုက်ထုတ်နိုင်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ ဝါဝစ်သ်တက္ကသိုလ်မှာ သုတေသီတွေက အနီရောင်စပျစ်သီးမှာပါဝင်တဲ့ Trans Resveratrol နဲ့ လိမ္မော်သီးမှာပါဝင်တဲ့ Hesperetin ဓာတုပစ္စည်းနှစ်မျိုးကို ပေါင်းစပ်ပြီး ဆေးဝါးအဖြစ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆေးဝါးဟာ လူကို အသက်အန္တရာယ်...
on: 04 Jul, 2017
ဗီတာမင်B12၏ ဓာတုဗေဒအမည်မှာ Cobalamine ဖြစ်ပါသည်။ ဗီတာမင်B12 ချို့တဲ့ခြင်း ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ အစားအစာအမျိုးမျိုးတွင် ဗီတာမင်B12 အများအပြား ပါဝင်နေပါလျက် ဗီတာမင်ကို အူမှမစုပ်ယူနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဗီတာမင်B12 ချို့တဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းများ အစာအိမ်နှင့် အူသိမ်ရောဂါများကြောင့် ဗီတာမင်B12ကို အူမှစုပ်မယူနိုင်ခြင်းသည် ဗီတာမင်B12 ချို့တဲ...
on: 27 Jun, 2017
ကျွနု်ပ်တို့အစားအစာများကို စားသုံးသောအခါ အရသာများကိုလည်း စုံလင်စွာ စားသုံးရန် လိုအပ်မည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းကျိုးပေးသော အစားအစာများကို အရသာငါးမျိုးပါသော အစားအစာများဟုဆိုကာ ခွဲခြားထားပါသည်။ ထိုအရသာ ငါးမျိုးပါသော အစားအစာများကို စားသုံးခြင်းဖြင့် လူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်း ငါးနေရာသို့ ကောင်းကျိုးများ အသီးသီးရရှိစေ နိုင်မည်။ အရသာငါးမျိုးမှာ ချို၊ ခါး၊ ချဉ်၊ စပ်၊ ငန် တို့...
ရောဂါနှင့် အစားအစာ (၃)
on: 24 Jun, 2017
ရောဂါရှိသူများသည် သာမန်လူများထက်ပို၍ အစားအစာစားရာတွင် ဂရုစိုက်သင့် သည်။ ရောဂါနှင့်တည့်သည့် အစားအစာများများစားခြင်း၊ ရောဂါပျောက်စေသော ဓာတ်စာများကို ရွေးစားပေးခြင်းပြုလုပ်ပါက ရောဂါကိုပို၍ ပျောက်ကင်းသက်သာစေနိုင် ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ရောဂါရှိသူများသည် ရောဂါနှင့်မတည့်သော၊ မစားသင့်သော ရှောင်ရ မည့် အစားအစာများကိုလည်း ရှောင်စားပေးသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် ရောဂါနှင့်တည့်သည့် အစာ၊ မတည့်သည့်အစာများကိုလည...
နို့တိုက်မိခင်များအတွက် နို့ရည်အထွက်များစေသည့် အစားအစာများ
on: 20 Jun, 2017
၁။ အုတ်ဂျုံများ (Oatmeal)အုတ်ဂျုံများသည် အောက်စီတိုစင်ဟော်မုန်းထွက်လာအောင် အားပေးသည်။ အဆိုပါဟော်မုန်းသည် ကလေးမွေးသည့်ဖြစ်စဉ်တွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သလို မိခင်နှင့် ကလေးကြားချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုလည်း တိုးအောင်လုပ်ပေးသည့် ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။နို ့ရည်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း များစေပါသည်။- အုတ်ဂျုံပူပူနွေးနွေး တစ်ခွက်ဟာ မိခင်များအတွက် ကလေးမွေးပြီးဖြစ်တတ်သည့် သံဓာတ်လျေ...
ဗီတာမင်ဆေးများကို သောက်သင့်သလား ??
on: 17 Jun, 2017
တစ်ကယ်တော့ ဗီတာမင်အာဟာရဓာတ်တွေကို နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေကနေ ပုံမှန်အလုံအလောက်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ကိုယ်စားတဲ့ အစားအစာများမှာ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မျှတဖို့တော့ လိုပါတယ်။ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ အစားအစာထဲမှာ ဗီတာမင်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းစားသုံးပေးဖို့လိုပါတယ်။ဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုပြဿနာ ခံစားရတဲ့သူတွေကတော့ --...
ရှောက်ရည် သောက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
on: 10 Jun, 2017
ရှောက်ရည်မှာ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင် ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပြီး ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကပင် အသုံးပြု ခဲ့ကြပါတယ်။ရှောက်ရည်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။(၁)ခုခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း(၂)အစာခြေရန် ကူညီနိုင်ခြင်း(၃)အာရုံစူးစိုက်မှု ကောင်းမွန်နိုင်ခြင်း(၄)အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်မှ...
on: 08 Jun, 2017
အိုင်အိုဒင်းဆား စားရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဟင်းချက်တိုင်းလည်း အိုင်အိုဒင်းဆား သုံးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့စားနေရမှန်းကို မသိဘဲနဲ့ စားနေရတယ်မလား ?? အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့လျှင် ဖြစ်မယ့် ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်တွေက ကြီးမားလို့သာ မဖြစ်မနေ စားသုံးရတာပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ အိုင်အိုဒင်း ချို့တဲ့လျှင်- ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတတ်ခြင်း- ကလေးအသေမွေးတတ်ခြင်း- လမစေ့၊ ပေါင်မ...
on: 06 Jun, 2017
ဆား (ဆိုဒီယမ်) စားသုံးမှုများခြင်းဟာ သွေးပေါင်ချိန် မြင့်ခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့အစာ (ဥပမာ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလံ) တွေ စားသုံးခြင်းဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာ ကျောက်တည်နိုင်တဲ့အလားအလာ၊ အရိုးမှ ကယ်လ်ဆီယမ်တွေ ထွက်သွားပြီး အရိုးပါးနိုင်တဲ့ အလားအလာတွေ လျှော့နည်းစေနိုင်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ လူကြီးတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာ လုံလောက်တဲ့ ပိုတက်ဆီယမ် စားသောက်မှု...
on: 03 Jun, 2017
လတ်ဆတ်တဲ့ ပန်းသီးလေးတွေဟာ စားချင်စရာပါပဲ။ အရည်ရွှမ်း၊ အရသာရှိလှတဲ့အပြင် ကယ်လိုရီဓာတ်လည်း နည်းပါးလို့ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးပြုပါတယ်။ ၅ အောင်စ (140 gm) လောက်ရှိတဲ့ ပန်းသီးဟာ ၉၀ ပဲပါဝင်ပါတယ်။ ပန်းသီးပင်တွေဟာ Temperate Climates အပူပိုင်း ရာသီဥတုတွေမှာ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုးမွှားတွေ ကူးစက်လွယ်ပါတယ်။ ပိုးစာ ပိုးဖောက်တတ်တာမို့ ပန်းသီးတွေကို ပိုးသတ်ဆေးတွေဖြန်းပြီး သုံးလေ့ရှိကြပါတယ...